आरतीले मागिन् ‘बा’ का छोराहरुसँग माफी (स्ट्याटससहित) « Ok Janata Newsportal
आरतीले मागिन् ‘बा’ का छोराहरुसँग माफी (स्ट्याटससहित)
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल पक्षको भातृ संगठन अनेरास्ववियूका नेता आरती लामाले सामाजिक सञ्जालमार्फत् माफी मागेकी छन् ।
आफूहरुले गरिरहेको आन्दोलनबाट कसैको चित्त दुखेको भए माफी चाहान्छु, उनले भनेकी छन् । अहिलेको लडाइँ जनताको बलिदानीबाट प्राप्त व्यवस्थाको रक्षाका खातिर भएकाले तानाशाही प्रवृत्तिका विरुद्ध क्रुर बन्नु परेको लामाको भनाइ छ ।
संविधानको रक्षार्थ र मुलुकको हीतका पक्षमा हिडेको नेतृत्वलाई सहयोग गर्नु सचेत नागरिकको कर्तव्य भएकाले आफूहरु सोही दिशामा अगाडि बढेको उनको भनाइ छ ।
तपाईंहरुको मन दुखेकोमा माफी चाहन्छु !
तपाईंले पुज्ने गरेको “बा“ को पुत्ला दहन गरेका होइनौं हामीले । तपाइँले कस्लाई पुज्नुहुन्छ र “बा“ भन्दै महिमा गान गर्नुहुन्छ, त्यो हाम्रो सरोकारको विषय पनि होइन । हामीले त जनताको बलिदानीबाट प्राप्त व्यवस्थाको रक्षाका खातिर क्रुर बन्ने सपना देखेको निर्लज्ज तानाशाह अथवा प्रतिगमन र पश्चगमनको नाइकेको पुत्ला दहन गरेका हौं ।
आजको २१ औँ शताब्दीमा पनि टाउको उठाउने प्रयत्न गरिरहेको हठी, घमण्डी, झुट र निरंकुश शासकको पुत्ला जलाएका हौँ । र भनिदिनु तपाईको शासकलाई कि, अब तिम्रो सत्ता र शक्तिको ढल्ने र खरानी हुने दिन पनि नजिकिँदै छन् ।
तर तिमी अझै पनि अन्धभक्त बन्न सक्छौ । लोकतन्त्रको सुन्दरता पनि यही हो कि, आफ्नो आफ्नो बिचार राख्ने ! तिमी कराउ, गाली गर र सकेजति नराम्रो भन तर पनि हामी पछि हट्ने सपनामा पनि नसोच । किनकी हामी संविधान, जनताको अभिमत र कानुनी राज्यको पक्षमा एक्लै भए पनि उभिन्छौं र कुनै पनि किसिमको सामन्तवाद, दक्षिण पन्थ र बहुलट्ठी शासक र उसका कर्तुतहरुको भण्डाफोर गरिरहन्छौं ।